बैंकहरुको धितोमा बदमासी कसको ? मूल्याङ्कनकर्ता कि कर्मचारीको ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७८, बुधबार १६:३०
घरजग्गा मूल्याङ्कनकर्ताहरुको संगठन भ्यालुएटर्स एसोसिएसनले पनि आज राजधानीमा बिरोध र्याली गरेको छ । उनीहरुले माइतीघरदेखि थापाथलीसम्म जुलुस निकालेका हुन् ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा मूल्याङ्कनकर्ता (इञ्जिनियर्स) माथि बारम्बार अमानवीय व्यवहार हुँदै आएकाले बिरोध ¥याली निकाल्नु परेको सहभागीहरुले बताएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष ऋषि कोइरालाको नेतृत्वमा उनीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिरोध जनाएका हुन् । प्रदर्शनकारीले माईतीघरबाट थापाथलीस्थित नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालयसम्म नाराबाजी गरेका थिए ।
प्लेकार्डसहित बिरोधमा उत्रिएकाहरुले गलत गर्नेलाई कारबाही गर, इञ्जिनियरलाई होइन मूल्ल्याङ्कनको प्रक्रिया यकीन गर, काम गर्नेलाई जेल बदमासी गर्नेलाई इज्जत, ऋणको मुनाफा कसले खान्छ ?, सुरक्षण वापतको धितो बैंकका कर्मचारीले हेर्छन् कि हेर्दैनन् ? जस्ता नारा लगाएका थिए ।
पछिल्लो दिनमा कुमारी बैंकका सीईओदेखिका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कमसल धितो राखेर अधिक कर्जा प्रवाह गरेका धेरै वटा घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले मूल्याङ्कनकर्ता र इञ्जिनियरले बदमासी गरेको भन्ने गरेका छन् । उनीहरुले बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्र त्यस्तो सम्भव रहेको आरोप लगाएका छन् । दुबै पक्षको कुरो र आरोपलाई हेर्दा बदमासीमा दुबैको भूमिका बराबर देखिएको बताइन्छ ।